पत्थरीको शल्यक्रिया गरेकी अस्मिको पेटमा डाक्टरले बिर्से रड, पेट दुखेर एक्सरे गर्दा सबै चकित ! डाक्टरले फेरी शल्यक्रिया गरेर निकाले सोहि फलामको रड « Light Nepal
पत्थरीको शल्यक्रिया गरेकी अस्मिको पेटमा डाक्टरले बिर्से रड, पेट दुखेर एक्सरे गर्दा सबै चकित ! डाक्टरले फेरी शल्यक्रिया गरेर निकाले सोहि फलामको रड
Published On :9January, 2018 1:45 am
काठमाण्डौ– पाटन अस्पतालले ललितपुरकी एक महिलाको शरीर शल्यक्रिया गरेर तीन वर्षसम्म पेटमा अड्किएको पाइप निकालेको छ । तीनवर्ष पहिले पाटन अस्पतालले नै पत्थरीको शल्यक्रिया गरेकी ललितपुरकी २४ वर्षीया अस्मी लोप्चनको पेटमा अड्किएको पाइप निकालेको हो ।
परिवारको आशंका तीन वर्षअघि सोही अस्पतालले गरेको पथ्थरी अप्रेशनको घटनासँग गएर ठोक्कियो । उनीहरुले त्यहीबेला चिकित्सकहरुले फलामको पाइप छाडेको हुनसक्ने आशंका गरेर अस्पताल प्रशासनसँग यो कुरा राखे । तर अस्पताल प्रशासनले तीन वर्ष अघिको कागजपत्र माग्यो । तर अस्मीका परिवारले त्यो कागजपत्र उपलब्ध गराउन भने सकेनन् । भूकम्पका कारण अस्मीको घर भत्किँदा शल्यक्रिया गरेको कागजपत्र हराइसकेको थियो । तर उनका आफन्तहरुको मन भने अझै अडिएन, उनीहरुले यो घटनालाई सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरे । सामाजिक सञ्जालमा घटना सार्वजनिक भएलगत्तै सर्वत्ररुपमा अस्पतालले गल्ती गरेको ठहर भयो । तर उक्त घटनालाई अस्पतालले बेवास्ता गर्दै गएपछि अस्मीका आफन्तहरु आन्दोलनमा जाने तयारी गरिरहेका छन् ।
साभार – रातो पाटिबाट
डा उपेन्द्र देवकोटाको शव श्रद्धाञ्जलिकालागि न्यूरो अस्पतालमा, आजै अन्त्येष्टि गरिदैं
काठमाडौं, ५ असार । वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा उपेन्द्र देवकोटाको आज पशुपति आर्यघाटमा विद्युतीय शवदाहगृहमा
गंगामायाको जीवन बचाउन बालुवाटारमा धर्ना सुरु
काठमाडौं, ३ असार । गंगामाया बचाऊ अभियानले गंगामायाको जीवनरक्षाका लागि धर्ना दिएको छ । द्वन्द्वकालमा
महोत्तरीमा सर्पको बिगबिगी, ४२ जनालाई टोक्यो
बर्दिवास, ३ असार । प्रचण्ड गर्मीबीच पानी पर्न थालेपछि महोत्तरी जिल्लामा सर्पदंशको घटना ह्वात्तै बढेको